मूलतः ठूला सक्षम ऋणीबाटै ब्याज रकम आएन। नियामक निकायले जुन वर्गको लागि राहत ल्याएको थियो, त्यसमा विचलन आएको देखिन्छ - Aathikbazarnews.com Aathikbazarnews.com मूलतः ठूला सक्षम ऋणीबाटै ब्याज रकम आएन। नियामक निकायले जुन वर्गको लागि राहत ल्याएको थियो, त्यसमा विचलन आएको देखिन्छ - Aathikbazarnews.com
यो अवस्थामा सेयरधनीका लागि विभेद भएको ठहर्छ। यो ठीक हुँदैन। कि त नगद आम्दानीलाई मात्र आम्दानीमा देखाउनु पर्छ वा असल ऋणको ब्याजलाई रेगुलेटरी रिजर्भमा ट्रान्सफर (स्थानान्तरण) नगरी ‘रिटेन अर्निङ’ मा नै देखाउनु पर्छ। मेरो विचारमा पाकेको ब्याजमध्ये नगद प्राप्त ब्याजलाई मात्र आम्दानीमा देखाउनु उपयुक्त हुन्छ।
(ग) २००७/०८ को बैंकिङ क्राइसिसपछि बैंकहरुले ‘इनकर्ड लस’ लाई मात्र नोक्सानी (देखाउने) गर्ने व्यवस्था दूरगामी अथवा दूरदर्शी भएन भनेर अतिरिक्त जोखिम ब्यवस्थापन गर्न भनेको छ।
आइएफआरएस (९) को मूल मर्म भनेको बैंकहरुले लोन लस प्रोभिजनिङ (नोक्सानी ब्यवस्थापन) गर्दा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले आर्थिक सुचकांक बिग्रिने अवस्थाको आधारमा ‘फर्वार्ड लुकिङ’ व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसबाट सृजना भएको नकारात्मक आर्थिक परिदृश्यका आधारमा ‘एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस’ (इसीएल) को खर्च व्यवस्था गर्नुपर्ने ब्यवस्था हो।
बैंकको अधिकांश परियोजनामा ६०/७० प्रतिशत ऋण लगानी रहेको हुन्छ। बैंकहरु पनि यही इकोसिस्टम भित्रका संस्थाहरु हुन्। परिणामस्वरुप उद्योगी-व्यवसायीलाई पर्ने असर वित्तीय क्षेत्रमा कुनै न कुनै रूपमा पर्छ नै। तसर्थ यो ‘एक्सपेक्टेट क्रेडिट लस’ (सम्भावित जोखिम) लाई अहिले नाफा आर्जन भएको अवस्थामा केही ‘लोन लस’ (जोखिम ब्यवस्थापन) गर्दै जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने अर्को विचारधारा छ।
ख) कोभिड-१९ ले कुन कुन क्षेत्रमा कति असर पर्छ भनेर हामीले सुक्ष्म अध्ययन गरी ‘हिट म्याप’ अनुसार असर परेका क्षेत्रहरुको मूल्यांकन गर्‍यौं। हाम्रो अध्ययनमा यदि कोभिड-१९ को असर अझै धेरै लम्बिएको अवस्थामा पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेको बैंकहरुको झण्डै ४/५ प्रतिशतको पोर्टफोलियो प्रभावित हुन सक्छ भन्ने देखिएको छ।
कोभिड-१९ लम्बिदा र कच्चा तेलको मूल्यमा आएको गिरावटले गर्दा नेपाल विप्रेषण भित्रिने मुलुकहरुको अर्थ व्यवस्थामा चुनौती थपिने छ। यसले विप्रेषणमा थप घट्ने छ र बैंकको खुद्रा उपभोग क्षेत्रको कर्जाको ‘डिफल्ट रेट’ (बिग्रिने सम्भावना) बढ्ने छ। यसले गर्दा बैंकको समग्रमा ५ प्रतिशत पोर्टफोलियोमा असर पर्ने प्रक्षेपण हाम्रो छ। अर्थात हामीले आगामी ४/५ वर्ष कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने खराब अवस्था (वर्स्ट केस सिनारियो) रूपमा लिएका छौं।
सिटिजन् बैंकको नाफा ३४ करोड ९१ लाख
डिजिटल कारोबार गर्न बैकर्स संघको आग्रह
जनता बैंक नेपाल लिमिटेड र हाम्रो अस्पताल प्रा.लि., बिराटनगर बिच स्वास्थ्य उपचार सेवामा छुट सम्बन्धि संझौता सम्पन्न भएको छ । संझौता पत्रमा हाम्रो अस्पतालका सचालक डा. संकरप्रसाद अधिकारी र बैंकको तीनपैनी शाखाका शाखा प्रमुख प्रशान्त शर्माले हस्ताक्षर गरेको थियो । संझौता अनुसार जनता बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारी र तिनका आश्रितहरुले उक्त अस्पतालहरुबाट बिशेष छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उक्त छुट सुविधा अस्पतालबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण ओ.पि.डि. सेवा, ल्याव, भर्ना भई गरिने उपचार सेवा तथा अप्रेशनमा प्रदान गरिने छ । यस छुट सुविधा अस्प
कतै सीइओको खोजीस्कतै राजीनामाको लर्को